Soomaaliya, 12 May 2018
Sabti 12 May 2018
Halkaan ka dhageyso barnaamijka Caweyska Washington. Waxaa soo diyaarshay soona jeedinaya Jacfar Kuukaay.
Dhageyso Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha
Halkaan ka dhageyso barnaamijka xiisaha leh ee Hambalyada iyo Heesaha, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daandureey iyo Caasha Ibraahim Aden (Cuud).
13 Al-Shabaab ah oo Hiiraan lagu Diley
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan 13 ka mid ah maleeshiyaadka Al-shabab lagu dilay dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaal saakay aroortii dhexmarey maleeshiyaad deegaanka ah iyo Al-shabaab.
Dhageyo Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka
Barnaamijka Dhacdooyinka Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
4 Ruux oo ku Dhimatay Qarax ka Dhacay Buulo-Mareer
4 ruux ayaa ku geeriyootay 5 kalana dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib marki miino dhulka lagu aasay ay maanta ku qarraxday Suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaalla deegaanka Buulomareer ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Websiga Shabelle oo Ku Fatahaaday Tuulooyin Hoos Yimaada Jowhar
Fatahaado xoog leh ayaa lagu soo warramayaa in ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada magaalooyinka Jowhar, Balcad iyo Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
Mareykanka oo eegaya warar la xiriira dilka shacab Soomaali ah
Qorshe cusub oo lagu sugayo amniga Muqdisho
Dowladda Soomaaliya ayaa wadda dadaal ay ku dooneyso in ammaanka magaalada lagu sugo, ayada oo ciidamo gaar ah u diyaarisay arrintaas.
Amniga Sh/Hoose oo sii xumaanaya
Faaqidaadda: Go'aanka Trump ee heshiiska Iran
Diyaarado duqeeyey saldhigyada Al-Shabaab
Diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidamo aan illaa iyo hadda si rasmi ah loo shaacinin dalkooda, ayaa xalay weerar ka geystay saldhig kooxda Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.